Ianareo miantsapy ety an-tsandriko | Fondation des Choisis de Jésus
Ianareo miantsapy ety an-tsandriko
2B_34: Ry Zanaka malalan’ny Fokon-dRay sy Reny, Efa akaiky ny fotoana. Mihazakazaha ianareo miantsapy ety an-tsandriko ! Raha mba fantrareo fa tena misokatra be ireo sandriko ! Tsy mijery na dia iray akory aza Aho amin’ireo tsy fahamendrehanao sy ireo hadisoanao. Miaike fa mpanota ianareo, omeo Ahy ireo « eninareo », raiso ny Fitiavako.